Fact Check: မြိုင်မြို့နယ်က NLD အောင်နိုင်ရေး ဆိုင်ဘုတ်တစ်ခုကို ဒီဂျစ်တယ် နည်းလမ်းနဲ့အသုံးပြုပြီး အမှားဖြန့်ဝေ - Factcrescendo Myanmar
October 20, 2020 October 22, 2020 နေရာမောင်LeaveaComment on Fact Check: မြိုင်မြို့နယ်က NLD အောင်နိုင်ရေး ဆိုင်ဘုတ်တစ်ခုကို ဒီဂျစ်တယ် နည်းလမ်းနဲ့အသုံးပြုပြီး အမှားဖြန့်ဝေ
ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စိုက်ထူတဲ့ NLD ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုရဲ့ စာသားတွင် ဒီဂျစ်တယ်နည်းလမ်းအသုံးပြုပြီး ပြောင်းလဲရေးသားထားတဲ့ ပို့စ်တစ်ခု လူမှုကွန်ယက်မှာ သတင်းမှားဖြန့်ဝေလျှက်ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီလိုပျံ့နှံ့လျက်ရှိတဲ့ပို့စ် ဓာတ်ပုံထဲက စာသားမှာ “လူကို ခွေးလိုအုပ်ချုပ်တဲ့ အစိုးရမျိုးရဖို့ NLD ကိုမဲပေးစို့”လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ဒီဓာတ်ပုံနဲ့အတူ “ကျွန်သဘောက်မကြီး SHOWလိုက်ပါအုံး အမေ့သားတွေနော် ဘာမှတ်လည်း #ဖျားသွားမယ် #လူညံ့တွေတင်မြှောက်လိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာ ခေါင်းဆောင်မဖြစ်ပဲ #လူညံ့ဦးဆောင်သူအဖြစ်သာတွေ့ရမှာ *ဆိုင်းဘုတ်သက်သေ* !:.” $%& /? *ဆောင်*တော့တူပါရဲ့ *ခေါင်းနဲ့ ဦး*ကွာသွားတာ”လို့ “Aung Htun Linn”အမည်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူက အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်က အောက်ပါအတိုင်း မျှဝေထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာလည်း အလားတူဓာတ်ပုံကို မျှဝေထားပါတယ်။
Google မှာ ပုံရှာနည်းနဲ့ အဓိကကျတဲ့ စကားလုံးတွေအသုံးပြုရှာဖွေကြည့်ရာမှာ ဒီပို့စ်ပါဓာတ်ပုံဟာ မြိုင်မြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြန်ကြားရေး ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာ စက်တင်ဘာ ၈ ရက်နေ့က “ကျောက်ဆောက် ကျေးရွာအုပ်စု၊ စဘေကျေးရွာ အောင်နိုင်ရေးဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲအခမ်းအနား”ဆိုပြီးတော့ ဖော်ပြထားတာတွေ့ ရှိရပါတယ်။
“Aung Htun Linn” အမည်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်ကအသုံးပြုထားတဲ့ပုံထက်စောပြီး အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ ပုံတွေမှာ “လူကို လူလိုအုပ်ချုပ်တဲ့ အစိုးရမျိုးရဖို့ NLD ကိုမဲပေးစို့”လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
“Aung Htun Linn” မျှဝေထားတဲ့ ပုံနဲ့ “တွံတေးသိန်းတန် ဟင်္သာတထွန်းရင် မင်းအောင် အနိုင် သီချင်းကောင်းလေးများ” အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေထားတဲ့ပုံကို အောက်ပါအတိုင်း ယှဉ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒီဓာတ်ပုံကို အခုလို စာသားနှစ်မျိုးနဲ့တွေ့ရှိနေရတဲ့အပေါ်မှာ ဓာတ်ပုံကို ပြုပြင်ထားခြင်းရှိမရှိ fotoforensics ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှာပါတဲ့ Erro Level Analysis(ELA) အသုံးပြုစစ်ဆေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
အထက်ပါအချက်အလက်အရ “Aung Htun Linn”အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူမျှဝေထားတဲ့ ဓာတ်ပုံဟာ ဒီဂျစ်တယ်နည်းလမ်းနဲ့ပြုပြင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။
Title:မြိုင်မြို့နယ်က NLD အောင်နိုင်ရေး ဆိုင်ဘုတ်တစ်ခုကို ဒီဂျစ်တယ် နည်းလမ်းနဲ့အသုံးပြုပြီး အမှားဖြန့်ဝေ
Fact Check: AAခေါင်းဆောင်နဲ့ တပ်မတော်ကာ/ချုပ်ဇနီးနဲ့ မောင်နှမဝမ်းကွဲ တော်စပ်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအမှား
January 8, 2021 January 8, 2021 Lynn Yu
October 26, 2020 October 26, 2020 Lynn Yu
October 22, 2020 October 22, 2020 နေရာမောင်
Fact Check: အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်ဆွေးနွေးမှုအပြီး စစ်ရေးပြင်နေပုံလား- မဟုတ်ပါ အစိုးရနဲ့တပ်မတော်ဆွေးနွေးမှု မအောင်မမြင်ဖြစ်ပြီးနောက် တပ်မတော်ဘက်က စစ်ရေးလုပ်ရှားမှုအ... by နေရာမောင်
Fact Check: ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က လူထုကို တောင်းပန်တယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ပြည်သူတွေကို တောင်းပန်တယ်ဆိုပြီးတော့ ၄◌င်းရဲ့ ဓာတ်... by နေရာမောင်
Fact Check: ပဲခူးမှာ ဝန်ကြီးချုပ် မဲပေးမယ့်သူတွေကို ကျပ် ၅၀၀၀ တန်တွေပေးခဲ့သလား ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအမှတ်တံဆိပ်တွေ ဝတ်... by နေရာမောင်
Categories Select Category Altered (5) Coronavirus (78) Explainer (3) False (367) False Caption (1) Misleading (82) Missing Context (2) Partly False (2) Social (1) ကူးစက်ရောဂါ (29) ကူးစက်ရောဂါ၊ အစိုးရ (4) ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေ (1) ကျန်းမာရေး၊ (15) ငွေကြေးကဏ္ဏ၊ ဗဟိုဘဏ် (1) စီးပွားရေး (5) ဆန္ဒပြပွဲ (1) ဆေးပညာ (1) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ (40) တိုင်းရင်းသားရေးရာ (1) နက္ခတာရာ၊အာကသသိပ္ပံ (1) နိုင်ငံတကာ၊ (57) နိုင်ငံရေး (228) နိုင်ငံရေး၊ (13) နိုင်ငံရေး၊ တပ်မတော် (1) နိုင်ငံရေးပါတီ (1) ဘာသာရေး (5) မြို့တော်များ (1) မှုခင်း (1) ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား (1) လူမှုရေး (160) လူမှုရေး၊ (23) လူမှုရေး၊ကူးစက်ရောဂါ (2) လူမှုရေးရေး (2) အစိုးရ (3) အနုပညာ (3)
Archives Select Month April 2021 (7) March 2021 (20) February 2021 (19) January 2021 (42) December 2020 (38) November 2020 (42) October 2020 (49) September 2020 (48) August 2020 (35) July 2020 (41) June 2020 (33) May 2020 (34) April 2020 (41) March 2020 (47)